Sebemfuna naseqenjini lesizwe e-Egypt uMosimane - Impempe
Sebemfuna naseqenjini lesizwe e-Egypt uMosimane
April 14, 2021 Impempe.com
UPitso Mosimane noMohamed Afsha Magdy
Sekuvele amahlebezi athi inhlangano eyengamele ibhola e-Egypt yeshela umqeqeshi we-Al Ahly odabuka kuleli, uPitso Mosimane ukuba abambe naseqenjini lesizwe lakuleliya lizwe elaziwa ngePharoahs.
UMosimane, owashiya isigubhukane kwiMamelodi Sundowns ngoba eseqashwe kwi-Ahly, usezakhele ugazi ngokuwenza ngobuchule umsebenzi wakhe kwi-Ahly, okuyiqembu elihlonishwa i-Afrika yonkana ngempumelelo yalo emangalisayo.
Izindaba zokushelwa kukaMosimane esikhundleni sokuphatha neqembu lesizwe ziqale ukuvela kwiTwitter ngoLwesibili ntambama kanti ziya ngokuqina impela. Kuthiwa ngeke ashiye kwi-Ahly kodwa uzoyenza yomibili le misebenzi.
Kodwa yize esemningi kule nkundla yokuxhumana uMosimane, akakasho lutho ngale ndaba. Lokhu sekususe umsindo kwiTwitter njengoba kukhona asebesola ukuthi lesi senzo se-Egyptian Football Association siyindlela yokuvimba uMosimane angabuyeli kuleli.
Angithi kusanda kuvela ukuthi nguye oseqhulwini lwabaqeqeshi abafunwa yiSafa ukuthatha isikhundla sokulolonga iBafana Bafana esale ingenamqeqeshi kulandela kuxoshwa kukaMolefi Ntseki.
La mahlebezi avela nje uMosimane ubesanda kuqokwa njengoMqeqeshi oVelele yinhlangano ebuzwa ngeEgyptian Sports Critics Association.
Ekhuluma ngokuhlinishwa kwakhe ngendondo yokuba nguMqeqeshi oVelele, uMosimane ubhale kanje kwiTwitter: “Lena yindondo yami yesibili ezinyangeni eziyisikhombisa. Ngibonga i-Al Ahly (abadlali, ithimba labaqeqeshi, abalandeli bethu umengameli uKhatib nebhodi lakhe lonke nomndeni wami).
“Umama ongizalayo, ozalwa kwaKhoza wangifundisa ukuthi ‘Mintiro Ya Vulavula’ (imisebenzi iyazikhulumela), yekela abanye balibale ukhuluma.”
Previous Previous post: Owamanqamu oweSundowns nePirates, kusho uMokwena
Next Next post: Uzokwaziwa maduze nje ozothatha eseBafana